သေချာစဉ်းစားပြီး လုပ်ကြပါ ရှမ်းခေါင်းများတို. ~ SAI SENG SERK
Home » MYOPINION » သေချာစဉ်းစားပြီး လုပ်ကြပါ ရှမ်းခေါင်းများတို.
ခေတ်အဆက်ဆက် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်လာခဲ.တာ လက်တွေလဲယမ်းစားလို.။ မျက်လုံးတွေလဲ တဖြေးဖြေးလဲမိုးလာပြီ ဘယ်တော.များ ငါတို.ရှမ်းပြည်ကြီးနိုင်ငံတကာလို Freedom ရရှိမလဲ။အခုလူတွေပြောပြောနေကြ Federalism ဆို တာ ငါတို.တကယ်လိုချင်တဲ.အရာကော်ပာုတ်ခဲ.သလား။ ၁၉၄၇ မှာအောင်ဆန်း နဲ. ပင်လုံစာချုပ်မှာ ချုပ်ဆိုလာခဲ.တာ အင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှာမနေချင်ဘူး ပြီး တော. ဗမာလက်အောက်မှာနေဖို.လဲ လုံးဝ စိတ်ကူး မရှိခဲ.ဘူး။၁၉၄၇ မှာပင်လုံစာချုပ်ထဲမှာ ချုပ်ဆိုလာခဲ.တာလဲ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင်.နဲ. လွတ်လပ်တဲ. နိုင်ငံတော်ကြီးတည်ထောင်ဖို.ပါ။ Federalism လုပ်ချင်တာမပာုတ်ပါ။လူများနိုင်ငံ (နိုင်ငံခြားက)ကငါတို. ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံကို Federalism သုံးဖို.လာပြီးတော. အကြံအဥာဏ်ပေး
ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို. ငါတို. ပင်လုံစာချုပ် ပယ်ဖျက်ချင်ကြသလဲ။ဒီ Federalism စနစ်ဆိုတာ လူများနိုင်ငံဖက်တည်ထောင်လာခဲ.တာ အဆင်ပြေပေမယ်. ကိုယ်.နိုင်ငံမှာ လုံးဝ အဆင်ပြေမယ်လို.မထင်ပါဘူး။ ပင်လုံ၏ အနှစ်သရ ပင်လုံ၏ အကြောင်းကြတော. ဒီနေ. ဒီချိန်ထိပဲ ထုတ်ဖော် လုပ်ပြမယ် ပင်လုံ ကတိအတိုင်းလုပ်ပေးမယ်ဆိုတာ တစ်ခါမှ မတွေ.ဘူး။တစ်ချိန်တုန်းက Federal ဆိုတာ ခွဲထွက်ရေးတဲ. အခုကြတော. လူတိုင်းလိုလိုပါပဲ Federal Federal ဆိုတာတကယ် လက်တွေ.ကြတော. လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါစေ။
လူမျိုးတိုင်းကော်အခွင်.အရေးအပြည်.အ၀တကယ်ရရှိမလား။ကျွန်တော်.အမြင်တော. နှစ်ပေါင်း ခြောက်ဆယ် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်လာခဲ.တာ နိုင်ငံရေးစကား ပြောချင်လို.ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင်.နဲ. ပြငှာန်းခွင်. လိုချင်တယ်။Federal System လိုချင်တယ်ဆိုပြီး တော်ထဲဝင်လာပြီး တော်လှန်ရေး သမားများရှိခဲ.ဖူးသလား။ကျွန်တော် ရှမ်းတပ်ထဲဝင်လာတာ Federalism လိုချင်လို. ၀င်တာမပာုတ်ဘူး ကိုယ်ပိုင်ပြည်နယ်နှင်. ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက် လိုချင်တယ် ဘယ်သူ.လက်အောက်မှ မနေချင်ဘူး။ ဒါပေမဲ. Federal ဆိုတာ ၂၀၁၀ မှာကျယ်ကျယ်ပျံ.ပျံ. သုံးစား ပြောလာကြတာအများဆုံးပဲ။တိုင်းရင်းသား
က Federal ဗမာလူများကြတော. Democracy ဘယ်လိုတောင်းဆိုတောင်းဆို ကြပါ။ Federal ၏အနှစ်သရသည် Freedom လောက်တော. ထိထိရောက်ရောက် Power သုံးနိုင်မယ်လို.ကျွန်တော်မယုံကြည်ပါဘူး ။ဘာလို.လဲဆိုတော.Federal ဆိုတာတိုတိုနဲ.အဓိပါယ်ဖွင်.ရင် Power Sharing ပဲ။ဒါတွေနဲ. ဘယ်လို ပဲဖြစ်ဖြစ် Federal ရရှိခဲ.မယ်ဆိုရင်တောင် ကျွန်တော်တို.တိုင်းရင်းသားတွေပာာအများကြီးပဲ တိုင်းရင်းသား တိုင်းကော် Federal အရသ ခံစားရမလား ???? ဒီလိုရေးခြင်းသည် ကျွန်တော်က Federal စနစ်ကိုသဘောမကျဘူး။ Freedom and Liberation system ကိုပိုကြိုက်တယ်။ရှမ်းလူမျိုး ရှမ်းခေါင်းဆောင်တိုင်းပဲနှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ်မကလို. ဘွားဘိုးတို.ခေတ်တုန်းကလဲ ရှမ်းလူမျိုးပာာ ဘယ်သူ.လက်အောက် ဘယ်သူ.အာဏာအောက်မနေခဲ.ဘူး။ကိုယ်.ထီး ကိုယ်.နန်းနဲ. ကိုယ်.ပြည်နယ်ရှိတယ်။လူများပြည်နယ်ကိုမခိုးဘူး မကျူးးကျော်ဘူး။ကိုယ်.ပြည်နယ် ကိုယ်.ထီးနဲ.နေလာခဲ.တာ။အဲဒါကြောင်. ကိုယ်လိုချင်တာတွေကို ကိုယ်ရအောင်ယူမယ် လူများစီမှာလဲ တောင်းစရာမလိုဘူး လူများစီကို လဲဘယ်တော.မှမျက်နှာကောင်းပြစရာမလိုဘူး ရန်သူကို ရန်သူမြင်စေချင်တယ် ရန်သူဆိုတာဘယ်တော.အခါမှ မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်လာမည်မပာုတ်။ယုံသူခံ ယုံသူရှူံးပဲ။ခံခဲ.၇တာတွေလဲမနည်းတော.ဘူး ဗမာအကျင်.ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးမသိတဲ.
လူကရှိသေးတယ်။ကျွန်တော်တော. ဗမာ၏စိတ်ဓာတ်နဲ. ဗမာအစိုးရ၏လုပ်ရက်သည် လူမဆန်ဘူး တိုင်းရင်းသားတွေကို ခွေးလိုထားပြီ သေချင်သေ ပြေးချင်ပြေး ခက်တာ သူတို. သားသမီးမပာုတ်တော. လုပ်ချင်သလိုလုပ်တာပေါ.။သင်ခန်းစာဆိုတာ ယုတတ်ရင် ဒီဗမာအစိုးရနဲ. လုံးဝ သူငယ်ချင်းကောင်း မိတ်
ကောင်းလုပ်စရာမလိုဘူး။ဘယ်တော.အခါမှ ဗမာအစိုးရသည် တိုင်းရင်းသား အပေါ်ကောင်းခဲ.တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ တိုင်းရင်းသား မြေတွေသိမ်း လယ်တွေ သိမ်း။ ရှိတဲ.စည်းစိန်ကိုလု သားရှိရင် ဘော်ဒါဆွဲ သမီးရှိရင် သူတို. မုဒိန်းကျင်.ခံဖိုမွေးလာတဲ.လူတွေပဲ တိုင်းရင်းသားဆိုတာ။ပြီးခဲ.တဲ. အတိတ်ကို အတိတ်မှာထားလို.မရဘူး။လူတိုင်းမှာ သူ.ခံစားချက်နဲ. သူရှိတယ်။အဲကြောင်. ကျွန်တော်.အသိ
စိတ်ထဲမှာတာ. Federalism စနစ်ရရှိဖို. မမျှော်လင်.ဘူး Liberation ရရှိဖို.ပဲသိတယ်။ လွတ်လပ်ရေးရဖို.ဆိုတာ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ဖို.လိုတယ် ပြည်တွင်းစစ်ဆိုတာအရမ်းလဲ စိတ်ပျက်ပါတယ်။
ခေတ်အဆက်ဆက်က ရှမ်းခေါင်းဆောင်လဲထို နည်းတူပဲ မာနကြီး ခြင်းပြိုင် ပြည်တွင်းစစ်ကို မပြီးနိုင်ဘူး။ဒီတစ်ကြိမ်ဒီတစ်ခေါက် ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်အုံးမယ်ဆိုရင် နောက်ဆုံးအကြိမ်ပဲဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
အဲကြောင်. ရှမ်းခေါင်းဆောင်များ ရှမ်းပြည်တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များ ရှမ်းပါတီ ခေါင်းဆောင်များ ရှမ်းပြည်ရှိ ရှမ်းလူမျိုးနွယ်စု ကြီးငယ်မရွေး သေချာစဉ်းစားကြည်.ပါ စီးပွားရေးအနေနဲ. ကျွန်တော်တို.ကို လာပြီးဆွဲဆောင်နေပါတယ်။ရှမ်းပြည်တွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားတွေကို စိတ်သဘောထားကွဲလွဲအောင် လုပ်တယ်။သေသေချာချာ စဉ်းစားပြီး လုပ်ဆောင်ကြပါ ဒီတစ်ခေါက် တောင်းဆိုနေတဲ. Federalism ကိုလဲ ပင်လုံလို မျိုးမမှားစေချင်ပါဘူး။အဲကြောင်. ရှမ်းပြည်နယ် အမြန် ဗမာလက်အောက် ကျွန်အဖြစ် အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေလို. အားလုံးပဲ မိုင်ဆွန်ခ . . . ။